तेस्रोलिंगीलाई सार्वजनिक हुँदा झनै समस्या- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
‘मेरो सरकार’ मात्र अनुहार फेर्छ  । ‘मेरो सरकार’ मात्र गाडी फेर्छ  ।
‘मेरो सरकार’ मात्र करको दायरा फेर्छ । ‘मेरो सरकार’ बेलाबेलामा सेवासुविधा फेरबदल गर्न सक्षम छ । बाँकी सबैमा ‘मेरो सरकार’ लगभग फेल भइसकेको छ ।
मनसुन सक्रिय छ । जताततै खोलानाला, खहरे, पोखरी भरिएका छन् । आम मानिस त्रसित अवस्थामा दिनरात कटाइरहेका छन् । केही वर्षदेखि किन बाढी–पहिरो, भूक्षय वृद्धि भइरहेको छ ? यसको न्युनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? यसतर्फ सरकारले किन न्यूनतम कार्य पनि गर्न सकिरहेको छैन ? सरकारको काम मात्र संवेदना प्रकट गर्नुमा सीमित भएको छ । पछिल्लो समय हाम्रो विकासको बुझाइ मात्र सडक भएको छ । त्यो पनि आआफ्ना स्वार्थ अनुसार, जसका लागि कुनै अध्ययनको आवश्यक पर्दैन र परम्परा नै छैन । हामीकहाँ त्यसैको कारण आज अनाहकमा आम नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । सरकार कहिल्यै नागरिकका समस्यातर्फ आकर्षित नै बन्न सकेन । यो बर्खा अझै कतिले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो, थाहा छैन । तर ‘मेरो सरकार’ मात्र यो गर्छु र त्यो गर्छु भनी फुइँ लडाएर बस्नमै ढुक्क छ ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १२:४४
ट्रक दुर्घटना हुँदा १ मजदुरको मृत्यु